Home Wararka Gudaha Khilaaf salka ku haya Al-Shabaab oo ka dhex qarxay culimada Somaliland
– Waxaa aad usii xoogeystay khilaaf xoogan oo u dhexeeya culimada Ictisaamka iyo Salafiyiinta ee Somaliland, kadib markii uu Sheekh Barbaraawi sheegay in uu xiriir ka dhexeeyo Ictisaam iyo Al-Shabaab.
Ilmo-galeenka Ictisaam ayuu Shabaab ka soo baxay. Ragga asaasay Shabaab waxa ay kamid ahaayeen Ictisaam. Isku fikir na way ahaayeen. Inta ay Shabaabku yiraahdaan bay oran jireen,” ayuu yiri Sheekh Barbaraawi.
Previous articleDEG DEG: Ilaalada Kulane ee Duufaan oo lagu xiray garoonka Aadan Cadde + Sababta
Next articleWararkii ugu dambeeyay Ciidanka NISA oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Gedo
Degdeg:Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Dil toogasha ku fulisay Ninkii...
Wafdi ka qeyb galaya Munaasabadda Caleema saarka Xasan Sheekh Gaaray...